3 QAAB OO FUDUD OO LACAG LAGU SAMEEYO [GUUSHA GANACSIGA) - Aayaha
Home/ARIMAHA BULSHADA/3 QAAB OO FUDUD OO LACAG LAGU SAMEEYO [GUUSHA GANACSIGA)
Lacag sameynta waa waa wax u wanaagsan naftaada iyo mustaqbalkaaga,waxana wax walba kasii wanaagsan markii aad lacag ka sameysid wax aad jeceshahay.
Qaar kamid ah ganacsatada ugu farxadda badan ee maanta jira waxa ay sameeyaan waxyaabo la jecelyahay iyagoo samirkooda kaashada, waad kamid noqon kartaa kuwaas kuna raaxeysan kartaa noloshaada adigoo sameynaya lacag wanaagsan dancan arrintaasina ma ahan mid fudud waxay u baahantahay adkeysi iyo inaad aqoon u leedahay haddii aad intaas leedahay ma jirto sabab aadan u guuleysaneyn.
Waa kuwaan sadexda qaab eek aa caawin kara inaad lacag ka sameysid waxyaabo aad jeceshahay.
Qof walba oo bini aadam ah oo maanta nool waxa uu leeyahay waana waxyaabaha guusha keena marka haddii aad howl ganacsi iyo wax lamid ah aad bilaawdid isla markaana samirtid si horusocod leh waad guuleysaneysaa samirka ayaa koow ka ah waxa guusha keena.
Waxaad u baahantahay inaad naftaada ku qancisis oo aad ad keeysatid isla markaana u sheegtid in tani ay tahay bilaawga safarka guusha maxaa yeelay waa badeecada aad dadka lacag isku weydaarsaneysiin.
Keen ama diyaarso adeeg ay dadka iibsanayaan
Mid ayaa ah inaad samirtid, waxa kale ayaad ah wax dadka ay xiiseynayaan waxaa muhiim ah in waxa aad keentid ay dadka jecelyihiin qofna lacagtiisa kuma bixinaayo haddii waxa aad keentid aysan ahayn kuwo aysan dan ugu jirin ama ay u baahanyihiin waa inaad keentaa waxyaabo ay dadka rabaan isla markaana ay lacag u quuraan.
Ragga ganacsatada ah ama haweenka ee guulaha ka gaara ganacsiga waxay ogyihiin Meesha ay danta ku jirto iyagoo iska xaliya halka ay qasaaro uga imaaneyso, la soco ganacsatada kuu dhow kana fikir guusha ganacsiga maanta, dhammaantood waxa ay hayaan wax guud waxayna dadka u keenaan waxyaabo tayo leh.
Waxyar ku bilaaw
Dhibaatada maanta heysata dadka da’da yar ama dhallinyarada ayaa ah waxay rabaan inay dhaqsi ku taajiraan mana doonayaan in ganacsiga waxyaabo yar ay ku bilaabaan isla markaana uu sii balaarto.
Ha ogolaan in caajiska iyo faham darrada ay baabi’iyaan waxyaabo waxtar kuleh, ganasigaaga ku bilaaw waxyaabo waxtar leh oo macaamiisha ay iibsanayaan.
DARAASAD: “Dadka isticmaala Taleefanka Iphone-ka oo dhanka jaceylka uga nasiib badan kuwa….”
4 SHAY OO NAAG KASTA AY U BAAHANTAHAY DA' WALBO HA JIRTO [ISKA BARO]
Cancers that are hard to detect at early stages
Nin Naxariis Badan Oo Kursi Ay Ku Fadhiisato U Noqday Xaaskiisa Oo Uur Leh
Shantaan Calaamadood Hadaad Gabadha Ku Aragto Waqtiga Ayay Kaa Lumineysaa Ee Mid Kale Ka Raadso